China Intamo isongele umkhenkce pack mveliso kunye nabenzi | Huanyi
Iipakethe zeNtloko zeI Ice
Iipakethe zeNeck Ice
Igxalaba lokugoqa ipakethe yomkhenkce
Ipakethe yeqhwa enomtya
Ukukhululeka kwezemidlalo Ukukhulula iipakethi zeqhwa
Imilebe yomlomo yomlomo
Gel Bead Isigqumathelo sobuso
Inja yeGel yokupholisa Mat
Intamo egxalabeni epakisha iqhwa
Isatifikethi: I-SGS MSDS FDA CE REACH
Ubukhulu: 35 * 16cm
Umbala: ngentando yakho Umbala: mfusa, luhlaza, bomvu
Ilogo: Ngaba ungenza ngokusesikweni
Amandla okubonelela: 200000 Piece / Pieces pe month
Ubude obahlukeneyo bokukhetha kwakho.
Isiqinisekiso: I-SGS MSDS FDA CE FIKELELA
Ubukhulu:35 * 16cm
Umbala: Elungiselelweyo Umbala: mfusa, luhlaza, bomvu
Ilogo: Ungenza ngokwezifiso
Amandla okubonelela:200000 Piece / Pieces pe pe
Ubude obahlukeneyo bokukhetha kwakho. Isongelo sihlala endaweni ngelixa sihamba, simile, okanye sihleli. Kushushu okanye kuyabanda kweNeck & Wrap Wrap kunokukunceda uphumle, uhlaziye kwaye ubuyisele umzimba nomphefumlo wakho.
Ixesha lesampula: 3-10days, nceda uthumele i-imeyile ngesampulu yeendleko zokuhambisa.
Imveliso: iintsuku 15-20 emva kokuba isampuli evunyiweyo.
Plain umbala: iintsuku 15-30 emva kokufumana 30% idipozithi.
Uyilo yoshicilelo: kwiintsuku 15-35 emva kokufumana 30% idiphozithi.
Uku-odola ngokungxamisekileyo: Ngaba ungakhawuleza, nceda uthumele i-imeyile ukuze uthethathethwano.
1. Iminyaka eli-10 yamava e-OEM, i-ODM, umbala oCwangcisiweyo, ilogo, iipakeji. Ngaba unokukunika iingcebiso zobungcali, uncede ekuveliseni esona sisombululo sisiso kwiimveliso zokuphucula iintlungu zejel.
2.Umveliso unemigca yemveliso engaphezulu kwama-20, ubuninzi bempahla eluhlaza kunye namalaphu ombala, umasifundisane weSilkscreen unokuhlangabezana neemfuno zakho kwilogo, sikwenza isiko lengxowa yomsebenzi ngokwethu singapakisha imveliso yakho icocekile.
3. Kulawulo lomgangatho kakhulu ukuze uqiniseke ukuba uya kuzifumana iimpahla ezonelisekileyo.
4.Kuba abo baphethe umva womkhenkce, ipakethe yomkhenkce, iipakethe zejel hemorrhoid, umzi-mveliso wethu unobungakanani obahlukeneyo kunye nemilo oyikhethileyo, inokulingana abantu abaninzi.
Uyenza njani iodolo?
2.Umthengi wenze i-30% yedipozithi okanye i-LC evulekileyo emva kokufumana i-Pl.
3.Umthengi uyavuma isampulu yethu, kwaye ufumane ingxelo yovavanyo ukuba kukho imfuneko.
6.Umthengisi ulungiselela amaxwebhu ayimfuneko aze athumele ikopi yala maxwebhu..Iziphumo zabathengi
7.Umthengisi uthumela amaxwebhu okuqala okanye ukhulule iimpahla.
8.Quality iwaranti iintsuku ezingama-60 emva kokuba zithunyelwe.
Egqithileyo Ipakethe yeqhwa enomtya
Okulandelayo: Ipakethe yomkhenkce wehemorrhoid
Eyona ndawo intle kakhulu kunye nePhepha leGxalaba
Ipakethe ye-Ice yeNtamo kunye neentlungu zamagxa
Ipakethi yomkhenkce yentlungu
Lwedilesi:I-Tongzhan Road, Idolophu yaseMeihua, iSihong County, iSixeko saseSuqian, kwiPhondo laseJiangsu, China 223900